Inona no sitrapon Andriamanitra ho an i Dago – MyDago.com aime Madagascar
Teny ho an’ny lohandoham-pirenena eto Madagasikara
Rehefa mamakafaka ny fandehan-javatra dia tsara raha mitodika kely manontany tena hoe inona no sitrapon’Andriamanitra ? Misy modely avokoa ny toe-javatra sitrak’Andriamanitra rehetra. Raha namboatra tabernakely ny zanak’Israely dia nisy modely maty paika tsy maintsy narahiny fa tsy nataotao foana izany. Ary izany koa no namelana ny Baiboly iray manontolo ahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra, hatao modely na dia ny hoavin’ny firenena aza.
Inona aza ny sitrapon’Andriamanitra amin’izao zava-mitranga eto amin’ny firenena izao ? Voalohany azo ampilaharana amin’ny andron’ny Mpanjaka ao amin’ny Baiboly ny zava-misy eto amin’ny firenena Malagasy. Tsy mitovy tamin’ny amin’ny andron’ny Mpitsara akory zay nanomboka tamin’i Josoa ka hatramin’ny Samoela. Voalaza tamin’izany vanin’andro izany Mpitsara 17 :6. Tsy nisy mpanjaka tamin’izany fotoana izany tany Israely ary samy nanao izay nataony ho marina avy ny olona rehetra. Fa mitovy kosa amin’ny andron’ny mpanjaka izay nanomboka tamin’ny Saoly.
Inona no zavatra niseho ? Nohosoran’Andriamanitra hitondra ny tany i Saoly (1 Samoela 10) kanefa rehefa nanaonao foana dia notsipahin’Andriamanitra taty aoriana ( 1 Samoela 13 :8) Ary dia nohosoran’Andriamanitra ho mpitondra indray i Davida (1 Samoela 16). Mbola teo amin’ny fitondrana anefa i Saoly.
Ny zava-nisy dia tsy nangalatra fahefana hitondra faran’izay haingana i Davida na dia azony natao farafaharatsiny indroa mihatoana aza izany (1 Samoela 24) fa niandry ny fotoanan’Andriamanitra izy. Taty aoriana rehefa lasa mpitondra i Davida dia nisy ireo olona saika hangalatra fitondrana tahaka an’i Adonija zanak’i Davida namory vahoaka marobe sy lohandohan’ny miaramila (anisany Joaba) ary mpitondra fivavahana 1 Mpanjaka 1. Tsy nankasitrahan’Andriamanitra anefa izany satria halatra.
Nisy ihany koa an’i Absaloma, mbola zanak’i Davida ihany nanodinkodina ny sain’ny olona hiala amin’ny mpitondra napetrak’Andriamanitra (Jereo manomboka 2 Samoela 15). Namory vahoaka sy manamboninahitra ary mpitondra fivavahana koa i Absaloma Kanefa mbola tsy sitrak’Andriamnitra ihany koa izany halatra fitondrana izany. Mazava be ny sitrapon’Andriamanitra.
Mbola averiny izany ao amin’i Habakoka 2 :12. Lozan’izay manao vohitra amin’ny fandatsahan-drà sy manorina tanàna amin’ny heloka. Ary indrindra indrindra ao amin’ny Exodosy faha 20. Nametrapetraka ny lalàna manaraka ny zanak’Israely mandrakizay Andriamanitra rehefa namoaka azireo tamin’ny fanandevozana tany Egypte. Anisan’izany didy folo ao amin’ny Exodosy faha 20 izany : 20 :15. Aza mangalatra 20 :16. Aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao 20 :17. Aza mitsiriritra ny tranon’ny namanao, aza mitsiriritra ny vadin’ny namanao, na ny ankizilahiny na ny ankizivaviny, na ny ombiny na ny borikiny, na izay mety ho an’ny namanao akory aza.
Efa maherin’ny efatra arivo taona izany tenin’Andriamanitra izany ary manankery mandrakizay ho an’ny firenena rehetra. Ambony ary manankery noho ny HCC ny didy folo. Raha ny didy folo miteny hoe aza mangalatra kanefa ny HCC mamboamboatra an’izany ho zava-mahafatifaty dia miantso loza ho an’ firenena iray manontolo ny mpitondra Malagasy. Ataonao ahoana ny hanery ny olona tsy hangalatra volan’olona, zavatr’olona, fananan’olona samihafa rehefa ny lohany no mampiseho modely manao ny tsy sitrapon’Andriamanitra amin’ny halatra ?
Izao no voalazan’ny mpaminany Isaia 5 :20. Lozan’izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy ! Ny toeran’ny miaramila. Mazava ho azy fa tsy manana alalana avy amin’Andriamanitra hampiasa hery na sanatria herisetra na fitaovam-pamoretana isan-karazany ny miaramila manitsakitsaka ny didy folo. Mandeha amin’ny fahotana sy fahavetavetana ary mandà ny sitrapon’Andriamanitra izay mampijoro ny fahefana avy amin’ny halatra amin’ny herin’ny basy na ny sandry. Sokajin’olona iray ihany (tsy olona mantsy fa fanahy) no afaka tsy hanaja ny didy folon’Andriamanitra dia ny fanahy ratsy na fanahy maloto izay fantantsika fa mitsipaka tanteraka ny tenin’Andriamanitra.
Koa andeha hiverina amin’Andriamanitra isika mianakavy fa masina ny tanindrazana !
Auteur zanak'i AbrahamaPublié le 24 juin 2009 8 mars 2011 Catégories PolitiqueÉtiquettes Dix commandements, Madagascar
12 pensées sur “Inona no sitrapon Andriamanitra ho an i Dago”
MasinaNy Tanindrazana dit :
25 juin 2009 à 16 h 24 min
ho an’i zanak’i Abrahama
latsaka ny ranomasoko raha namaky ny lahatsoratra «inona no sitrapon’Andriamanitra ho an’i Dago ?». Tena tohina ny foko satria voapotsitra ny tena fery ka maharary. Marina tsisy diso ny fampitahana nataonao fa ny fiverenana amin’ilay «Andriamanitra ao an-tampon’ny loha» no sitrapon’Andraimanitra ary hampiadana ny firenentsika.
«tain’omby mivadika aza tsisy sahy nangalatra» fahiny , ankehitriny dia ny fahefana mihitsy no rombahina amin-kery. «Rah tsy Jehovah no manao ny trano dia hiasa foana ny mpanao azy». Inona no nanjo ireo zanak’i Davida nangalatra fahefana ?
Aoka izay misaina hisaina sy handinika fa Andriamanitra tsy azo vazivazina ary «Andriamanitra tsy handrin’ny sasany handriko ihany ».
Nomeny antsika malagasy i Dago, anjarantsika ny mikarakara sy mitahiry azy ho firenena vanona mendrika ny taranaka faramandimby. Nahalala ny didy 10 ve ireo razantsika ? angamba tsy nahalala izy ireo nefa nitandrina ny fihavanana toy ny anankandriamaso. Inona moa ny FIHAVANANA ? azo adika hoe FITIAVANA, izay lazain’ny SORATRA MASINA hoe «fa ny fitiavana no fanatanterahana ny lalàna(didy 10 izany)». Izany hoe raha tiako Andriamanitra dia tsy hanompo sampy aho, raha tiako ny raimandreniko dia hanaja azy ireo aho, raha tiako ny namako dia tsy hangalatra ny zavany aho, raha tiako ny havako dia tsy hitsiriritra ny zavany aho, raha tiako ny mpiray tanindrazana amiko dia tsy hamono olona aho sns sns … raha fintinina dia izao : raha tsy misy ny fitiavana dia tsy ho tanteraka ny didy 10, tsy misy firenena vanona raha mbola atao tsinontsinona ny didy 10. Ny FAHATAHORANA AN’ANDRIAMANITRA no tena nahatonga ny razam-bentsika handala ny fihavanana.
koa ekeko amin,ny foko manontolo ny antso nataonao ho an’ny mpiray tanindrazana rehetra hoe «andao hiverina amin’Andriamanitra isika mianakavy fa masina ny Tanindrazana»
25 juin 2009 à 18 h 08 min
La COMMUNAUTE INTERNATIONALE :
complice, et Responsable d’Un Coup d’Etat annoncé, du desordre,et… des morts à Madagascar !
Organisme sourd et incompetent à resoudre les Problemes africains et Malgaches.
Vive LA LEGALITE QUE NOUS RECLAMONS en la personne de Notre President LEGAL.
25 juin 2009 à 18 h 12 min
NOUS PREFERONS LA PAUVRETE ET LA LEGALITE
NOUS NE VOULONS PAS D’UN HAT A LA SOLDE D’UNE FORCE ETRANGERE !
Seuls moyens a maintenir
3)SABOTERE , SABOTER , SABOTER PAR TOUS MOYENS A SA DISPOSITION ………….
……………….Mais SABOTER A LA BASE , LA OU CELA LE PLUS MAL
SOIT SQBOTER DQ4QBORD ET SURTOUT LES INTERETS fr
25 juin 2009 à 20 h 02 min
IL Y EUT UN VIRUS
PRECISONS SABOTER SURTOUT LES INTERETS FRANCAIS ///////
26 juin 2009 à 19 h 05 min
LE PARDON NE VIENT PAS DE TOI, C’EST CE QU’ON APPELLE L’OEUVRE DE DIEU, TU PEUX TOU DIRE MAIS QUELQUE SOIT TA PENSEE, TES FAITS ET TES GESTES TU NE POURRAS JAMAIS ENLEVER OU EFFACCER LE PARDON D’UN HOMME QUI S’EST REPENTI, TU OSES JUGER ALORS QUE TU N’ES MEME PAS JUGE, ALORS MEFIE TOI, ET SACHE BIEN QUE L’ENVIE DE PARONNER ET DE SE FAIRE PARDONNET EST LA FORCE DU PREIDENT RAVALOMANANA TU N’AS PAS OUBLIE LE PROVERBE QUE CELUI QQUI CACHES SES FAUTES NE SERA PAS BENI, HEUREU CELUI QUI OSE CONFESSSER SES FAUTES DEVANT L’ETERNEL
29 juin 2009 à 14 h 56 min
tsy misy afatsy vavaka ihany no vaha olana amin’izao fiainana izao araka ny tenun’Andriamanitra hoe Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao ny fifankatiavana no lehibe indrindra e! misaotra betsaka
mba misy fahendrena mihintsy ity teny voalazanao ity r’i Masina Ny Tanindrazana â !
marina mihintsy izany , ary ny Baiboly dia miteny hoe » Dieu règne sur le règne des hommes « »Il fait droit à chacun »
fa isika mantsy no mi-ignorer azy ka manaonao foana dia izao loza izao no vokany ê!
aleo tokoa miverina amin’n’i Tompo Jesosy izay efa nandresy izao tontolo izao teo amin’ny hazo fijaliana mba hamonjena antsika!
Que Dieu bénisse Madagascar et le peuple malgache
la HAT est pire qu’une sangsue …..elle doit consulter la verité de la Parole de Dieu pour les emmener dans le droit chemin…
harifetra jeannot dit :
izao no izy:ny firenentsika tsy firenena voaozona fa voatahy.fa raha misy manao ampatambary ny fitahiana dia izao no manjo antsika.mila lifona sy mivavaka isika ry jiosy gasy.vavaka no mahafaka ny firenentsika ary indaray andro any dia ho iray finoana sy fivavahana isika izay iray fiteny sy iray tanindrazana.mibebaha ry zanak’israely « malagasy » ô!
Misaotra an’Atra fa mbola maro ny olony mihaino ny antsony ka mizara ny teniny ho any vahoaka Malagasy.Marina avokoa ny voalzanareto eto ry 1 sy 2 sy ny sisa izay mankasitraka fa ny fiverenena @ Andriamanitra no hanafaka indray ny firenentsika eo an-tànany ratsy , vao avy namaky ny tantaran’i davida tokoa aho t@ herinandro. Aoka isika hiankohoka eo anatrehan’Atra , hifona ho any Firenena fa Azy ny tany sy izao rehetra eo aminy ary tsy misy tsy hainy atao. Aoka ho fantatsika fa « le pardon libère » ary ny olona matahotra an’Atra no voavelà @ fifonana ataony. Ahoana hoy Estera ao @ toko faha8 and 6: » ataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko? Ary hataoko ahoana no fijery ny fandriganana ny havako? » handeha isika hiaraka hanantony eo @ seza fiandrianan’Atra hitondra ambavaka ny Firenentsika .Ny Tompo anie hanafy hery antsika ary ho eo ambininy fiadanana mandrakariva isika.Misaotra Jesosy o!
Précédent Article précédent : Eau pour eau, scandale pour scandale !
Suivant Article suivant : Dernier article